Syncari: Gbanwee ma jikwaa data Cross-Functional Data, Automate Workflows ma kesaa nghọta a tụkwasịrị obi na ebe niile. | Martech Zone
Ndị ụlọ ọrụ na-eri mmiri na data na-agbakọ na CRM ha, akpaaka ahịa, ERP, na isi iyi data igwe ojii ndị ọzọ. Mgbe ndị otu ọrụ dị oke mkpa enweghị ike ikwenye na data nke na-anọchi anya eziokwu, arụmọrụ na-egbochi ọrụ na ebumnuche ego na-esiri ike inweta. Syncari chọrọ ime ka ndụ dịrị ndị na-arụ ọrụ mfe ahịa ahịa, ahịa ahịa, na ego enweta ego ndị na-agbasi mbọ ike inweta data iji nweta ebumnuche ha.
Syncari na-ewe ụzọ ọhụụ maka mwekota, akpaaka, na njikwa data. Ngwurugwu data ha zuru oke na-eme ka ha dị n'otu, ọnụ ọgụgụ, ma na-ehicha data na sistemụ gị niile. N'adịghị ka Workato ma ọ bụ MuleSoft, Syncari na-enye codeless data management ọrụ iji nyere aka arụmọrụ ọkachamara machiini usoro na data ha tụkwasịrị obi. Usoro njikwa data ahụ na-ekesa data tụkwasịrị obi na nghọta azụ na ngalaba niile isi iyi nke eziokwu ma debe sistemụ ndị a na ibe ha dịka data ka mma si apụta. Nke a na - eme ka ndị otu gị pụọ na ibu arọ nke nyocha data akwụkwọ na mkpocha site na ịtinye na ịbawanye data data, ịhazi usoro, na de-mbiputegharị.
Syncari bu uzo ka nma iji dozie usoro data nke ulo oru. Ọ na - ejikọta ikike nke FiveTran, ụlọ nkwakọba data (dịka Snowflake), na Census / Hightouch na otu ikpo okwu zuru oke iji mee ka njedebe na njedebe dị mfe. Syncari gwakọtara mwekota, akpaaka, na njikwa data n'ime otu ikpo okwu zuru oke iji nye onye ọ bụla ohere imebi ọgbaghara a site na ịme usoro-ụzọ mbụ.
Syncari Data Management Platform Na-enye:
Modeldị data dị n'otu - Usoro ọ bụla na-akọwa ndị ahịa n’ụzọ dịtụ iche. Anyị emezila nke a maka gị, yabụ sistemụ gị niile nwere ike ịsụ otu asụsụ.
Multi-directional mmekọrịta - Nọgidenụ na-cross-usoro data kwekọọ na anyị patent-rue mgbe azụmahịa engine na-ekwusi ike na-achịkwa data gafee ọ bụla ejikọrọ usoro na-akpaghị aka.
Njikwa usoro akpaghị aka - Mgbe ọhụrụ ubi na-kwukwara ma ọ bụ wepu ọ bụla data isi, Syncari akpaghị aka mmelite niile impacted Filiks. Ndeewo na-agbasa mgbanwe!
Kesaa njikwa data - Akpaghị aka na atumatu data emepụtara na Syncari na-emekọ ihe data data jikọtara na usoro data jikọtara ọnụ, na-eme ka usoro data dịtụbeghị mbụ.
N'adịghị ka ọdịnala njikọ, Syncari Synapses na-aghọta usoro njedebe usoro nke ọma, na-enye nnwekọ miri emi maka arụmọrụ dị iche iche dị ka njikọta na nro-ihichapụ, ma jikwaa mmetụta nke mgbanwe atụmatụ na gafee Synapse niile. Ọbá akwụkwọ ha nke njikọta gụnyere Airtable, Amazon S3, Amazon Redshift, Amzon Kinesis, Amplitude, Drift, Eloqua, Intercom, Microsoft Dynamics 365, Freshworks CRM, Gainsight, Google BigQuery, Google Sheets, Hubspot, Jira, Marketo, Mixpanel, MySQL, NetSuite , Outreach, Salesforce Pardot, Pendo, PostgreSQL, Salesforce CRM, Sage Intactt, SalesLoft, Snowflake, Workday, Xero, Zendesk, na Zuoro.
Rịọ maka Syncari Demo
Tags: Redshift Amazonamazon s3njupụtaAmzon Kinesisakpaakaonuoguguenweghị kooduenweghị njikọdata akpaakantinye datadata managementnhazi usoro njikwa dataụlọ nkwakọba ihe datadọrọ na dobeịdọrọ na dobe mwekotanwayọọokwuenterprisedata ulo oruNkeji iseIhe ohuru CRMnghọtaGugulu BigQueryOkwute GoogleUchechukwuokpokoromwekotaájáJirajikwaa dataahịamicrosoft na-agbanwe agbanwe 365MixpanelMySQLnetsuiteije ozigboPendoPostgreSQLSage Mmekọrịtaere ahịa crmMgbaghara ahịaỌrịre ahịaSnowflakeisi iyi nke eziokwuụbọchị ọrụXeroOnyebuchiZuora
Mee 13, 2021 na 3: 03 PM
Daalụ maka ikpuchi anyị. Edere nke a nke ọma! Enwere ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na m nwere ike inyere gị aka n'ụzọ ọ bụla, egbula oge iru eru.
Mee 14, 2021 na 4: 25 PM
Daalụ maka ihe edeturu, Nick! Na-atụ anya ịkekọrịta n'ime miri - Ezigala ụfọdụ ozi ụfọdụ ndị mmekọ.